CDMA 800MHz vs GSM Internet speed — MYSTERY ZILLION
CDMA 800MHz vs GSM Internet speed
January 2011 edited March 2011 in Tech News
Guys, can you please post your
It would help people who wants to buy CDMA 800MHz and GSM for Internet. I know GSM Internet just started today but for the future.
Location - Latha Township, Yangon
Time - Day Time
Device - Laptop With EVDO Modem
Speed - As shown in following picture
wow thats fast! Buts its already 1AM. Still, its fast!
Location - Tamwe
Device - Laptop with2The Max EVDO modem
Speed - See at the picture
wow! thats the fastest internet in Myanmar!
EDIT: Ohh yours says kbps. My bad... Challenger220's much faster..
လက်ရှိ၇က်ပိုင်းမှာ ဟော့ဖြစ်နေသော5သိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ် ပါ
အင်တာနက်ဂျာနယ်ထဲမှာ အခုတစ်ပတ်တော်တော်ကို တိတိကျကျပါခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ 31 ရက်နေ့ လျှောက်လို့ရပြီး ဘယ်မှာလျှောက်ရမယ်။ ဘာလိုမလဲ စသဖြင့်ပေါ့။
တကယ်တော့ဗျာ ဒီနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရွေဂုံတို်င်က မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးကို လျှောက်ဖို့သွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီက ပြန်ပြောလိုက်တာက အထက်က ဘာမှမညွန်ကြားသေးဘူးတဲ့။ ပြီးတော့ နှစ်ပတ်လောက်ကြာရင် ပြန်လာကြည့်တဲ့ဗျာ။ ဘယ်လိုလဲ မသိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ကျနော်သူငယ်ချင်းက ပြောတာပေါ့။ ဂျာနယ်တွေ၊စာစောင် တွေမှာ အတိကျရေးနေကြတယ်လို့။ အဲဒီမှာ ၀န်ထမ်းက ဂျာနယ်တွေက ဒီလိုဘဲ ဖွတယ်ပေါ့။
ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးဗျာ။ အပြင်ရောက်တော့ ပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်။ သူက ဘာပြောသလဲ ဆိုတော့ အကိုမနက်ဖြန်ရမယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် တစ်သိန်းပိုပေးရမယ်တဲ့။
really??? Yeah i saw it in Internet Journal and I thought you can buy them already. This is really stupid if you can't buy yet! Dont believe "pwel sar". They will take his money and run away. hahah
အရင်က စျေးကြီးပေး၀ယ်ထားတဲ့ GSM အဟောင်းတွေကိုရော ငါးသိန်းတန် GSM အဖြစ် ပြောင်းလို ့ရလားဟင်??????
ပြီးတော့ အဲဒီ GSM အဟောင်းတွေကရော အင်တာနက် ရနိင်ခြေရှိလားဟင်:mad::mad:
2လ ပိုင်းကုန်ရင်တော့ 15သိန်း5သောင်းတန်တွေကိုလည်း တစ်ခါတည်းလုပ်ပေးမယ်လို့ ကြာတယ်။
ဖြစ်နိုင်လား...မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ ကျနော်တို့ မန်းမှာ 15သိန်း5သောင်းတန် ဂျီတွေကို တစ်ရက်ဘဲ စမ်းဖွင့်ပေးသွားတယ်။
ပြောချင်တာက ကျနော်တို 15သိန်း5သောင်းတန် ဂျီတွေမှာ အခုဆိုရင် 480,000 လိုင်းချထားပြီးပြီ။
အခု5သိန်းတန်တွေကို 200,000 လိုင်ချထာ ပေးမယ်ဆိုတာက 5သိန်းတန် ဂျီတွေအတွက် သီသန့် စက်ထိုင်တာလား...15သိန်း5သောင်းတန် ဂျီ အပေါ်မှာဘဲ လိုင်ထပ် တိုးပေးတာလားဗျာ။
CDMA 800 မှာလည်း5သိန်းတန် နဲ့ 15သိန်း5သောင်းတန် လိုင်းတွေက ခွဲထာတာလား... အဲဒီစက်မှာဘဲ ထပ်တိုးတာလား...
အပွင့်လင်းဆုံး ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ အရင်က ၁၅သိန်း ၅သောင်းတန်ကို အခု ၅သိန်းနဲ့လျှော့ ရောင်းပေးတာပါ။:cool:
လူတော်တော်များများ ဖုန်းကိုင်နိူင်ပါစေဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ... အဟဲဟဲဟဲ... တစ်ခုခုဆို ငါမပါဘူးနော်... မေးလို့ဖြေတာ...
ငါးသိန်းတန် တွေ ရောင်းလို့ကုန်သလောက် ဖြစ်ရင်တော့ ၁၅သိန်းတန် အတွက် အင်တာနက် လာမှာပေါ့.....
မဟုတ်ရင် ၁၅သိန်း တန်တွေပဲလာပြီး Upgrade လုပ်ကြရင် ငါးသိန်းက ရောင်းမထွက်မှာစိုးလို့ ....:rolleyes:
အဲဒီသတင်းက Yatanarpon Web Portal ကလာတာ... ၃၁ ရက်နဲ့ လျှောက်လို့ရမယ် ဘာညာနဲ့ ရေးထားတာတွေ့လိုက်ရသေးတယ်....
အဲဒါကို အင်တာနက်ဂျာနယ်က ကူးရေးတာ...
ဖွတယ်လို့ ပြောချင်ရင်တော့ ရတနာပုံ ဝတ်ပေါ်တယ် ကိုပဲ ဖွတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ...
ဒါပေမယ့် ဒီလိုပါပဲ... EVDO တုန်းကလဲ လျှောက်လို့ရပြီလို့ ပြောတဲ့ နေ့ထက် တစ်ရက် နောက်ကျပြီးမှ လျှောက်လို့ရတာလေ... ဒီတော့ နောက်နေ့သွားလိုက်ပေါ့ ... ရမှာပါ...:cool:
GSM got different bands too. Like GSM-850, 900, 1800 and 1900. But most of the GSM phones supports most of the bands we use on the world. So they don't bother specifying GSM bands anymore. I don't really know whats the different or what are they using for new5thein GSM. New one got longer phone numbers though.
For our old GSM phones, Internet Journal said we will get internet somehow. Price plan or date is unknown yet. I would really love to get 250kB/s like above.
မနေ့ည ရတနာပုံ ပေါတယ်မှ နောက်ဆုံးရရှိသော သတင်းအရ
၅ သိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ အမှန်တကယ် ချထားပေးမည် ဖြစ်သော်လည်း ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်း
02/01/2011 - 20:03
ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက်တွင် ချထားပေးရန် စီစဉ်ထားသော ကြိုတင် ငွေပေးချေကဒ် စနစ်သုံး ၅ သိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းများကို အမှန်တကယ် ချထားပေးသွားမည် ဖြစ်သော်လည်း ကြိုတင် ငွေပေးချေကဒ်များ အဆင်သင့် မဖြစ်သေး၍ ရက်အကန့်အသတ်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းထားကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ သိရပါတယ်။
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအနေနဲ့ ဇန်နဝါရီ ၃၁ ရက် လွှတ်တော်ခေါ်ယူမှု အထိန်းအမှတ် အဖြစ် ကြိုတင် ငွေပေးချေကဒ် စနစ်သုံး ၅ သိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းတွေကို ယင်းနေ့မှာ ချထားပေးဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာပါ။ "ချထားပေးဖို့ အစီအစဉ်ကို လုံးဝ ဖျက်သိမ်းလိုက်တာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး" လို့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ အရာရှိ တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ အဆင့်ဆင့် တင်ပြမှုတွေအရ သုံးစွဲသူ များပြားလာနိုင်တဲ့ ၅ သိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းတွေအတွက် ကြိုတင် ငွေပေးချေကဒ် အလုံအလောက် ထုတ်လုပ်ဖို့ အတွက်တော့ အခက်အခဲ ရှိတယ်လို့ ၎င်းက ဆိုပါတယ်။ ကြိုတင် ငွေပေးချေကဒ်တွေ ရောင်းချပေးဖို့ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းနဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးကလည်း ၎င်းတို့ အနေနဲ့ လက်ရှိမှာ မက်စ်ဝဲလ် (McWiLL) အတွက် ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ကြိုတင် ငွေပေးချေကဒ်များပင် လုံလောက်အောင် မထုတ်လုပ်နိုင်သေးကြောင်း ပြောပါတယ်။ ရတနာပုံ ဝဘ်ပေါ်တယ် အနေနဲ့ ကြိုတင် ငွေပေးချေကဒ် စနစ်သုံး ၅ သိန်းတန် ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းများ ပြန်လည် ချထားပေးမယ့် နေ့ရက်ကို မေးမြန်းရာမှာတော့ ချထားပေးဖို့ သေချာသော်လည်း ရက်အတိအကျ ပြောနိုင်ဖို့ အတွက်မူ အခက်အခဲ ရှိနေသေးကြောင်း မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း မိုဘိုင်းဌာနမှ ပြန်လည် ဖြေကြားပါတယ်။
speed - highest is DL=280KByte/s
Device=2theMax CDMA EVDO Modem
ဘာများလည်းလို့ ဖတ်ကြည့်နေတာ နောက်တော့ M1, တို့ singtel တို့လို့ plan နဲ့ mobile broadband plan တွေလိုကို .. ငါးသိန်းပေးပြီး မြန်မာပြည်မှာချပေးလိုက်တဲ့ ပုံစံမျိုး လုပ်ထားတာဟုတ် ... စလုံးကတုန်းက ထိလိုက်သေးတယ် ..ပထမနေတွေ့မှာလိုင်းကောင်တယ် နောက်လည်းကျရော ဘာမှသုံးလို့ရတော့ဘူး...plan ကြီးနဲ့ ခြောက်လ လစဉ်ကြေးပေး နေရကော ၂၀၀၈ လောက်က ထိဖူးတယ်..ခုတော့လိုင်းကောင်းလောက်ရောပေါ့ 2011 တော့င် ရှိနေပြီလေ.. နောက် မလေးရှားက plan တွေကပိုမိုက်ရိုင်းတယ် download limit ပါသတ်မှတ်ထားတယ် ပေးထားတဲ့ download limit ကျော်သွားရင် ပိုက်ဆံ ထပ်ပေးရတယ်... ဘန်းကျော်က Plan တွေ လည်းဘယ်လိုလာမလည်းသိဘူး 638kb ဆိုတာကတော့ များတယ်ပြောလို့ရတယ် .. နောက် ၅ သိန်းက အပြီး အစီးလား.. ထပ်မပေးရတော့ရင် နို်င်ငံခြားသွားနေတဲ့ဘန်းကျော်သားများ အိမ်က ချစ်သူ အတွက် ၀ယ်ပေးထားသင့်တယ်.. အင်တာနက်ဆိုင်သွားတာထက်ပိုစိတ်ချရတယ်.. .
မှန်လိုက်လေ.... ဒီမှာလဲ အခုတော့ ကောင်းတယ် ... ဒါတောင် အရင်က နေ့ဘက်လဲကောင်းတယ်... အခုနေ့ဘက်ဆိုမကောင်းချင်... ညဆိုလဲ အရင်လောက် မကောင်းတော့ဘူး...
သိတဲ့အတိုင်းပဲ... ဒီမှာက ဘာမှ သေသေချာချာ သိရတာ မဟုတ်ဘူး.... ၅သိန်းနဲ့ ထပ်သွင်းငွေ သုံးသောင်း ပြီးတော့... တစ်မိနစ် ၄ကျပ်....
Data နဲ့တွက်တာတော့ မဟုတ်ဘူး လောလောဆယ် မိနစ်နဲ့တွက်နေတာ...
နှစ်ကုန်တော့မှ လစဉ်ကြေးထပ်တောင်းတော့လဲ ခံလိုက်ပေါ့... ဘယ်တတ်နိူင်မလဲ .... လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်လဲ လုပ်ချင်တာသာလုပ်လို့ပဲ ပြောရမလားပဲနော်...
Sad News for MPT users.
I just heard that CDMA (and New GSM as well) are using MPT internet lines. McWill is using Yadanapon.
Someone says that is why we are having issues with login problems (worst than before) because the servers cannot handle the load and kept on crashing the system. They said they are not planning to upgrade any Bandwidth or Servers
That means when there are more CDMA users and new GSM users, MPT internet users are doom! :mad:
MPT & Yatanarpon are the same. They just different in name.... he hee hee... :cool:
hehehe not really. Yadanapon use different backbone lines from MPT. I heard Yadanabon is using line from China. I forgot where MPT us getting from.
ကျနော်တစ်ခုလောက် သိချင်လို့ပါ cdma 800 Mhz ကို အင်တာနက်သုံးချင်ပါတယ် computer နဲ့ချိတ်မသုံးပါဘူး ဖုန်းမှာပဲ သုံးမှာပါ ဘယ် ဖုန်းအမျိုးအစားတွေက သုံးလို့ရလဲသိချင်ပါတယ်...
ုကျနော်မေးကြည့်တော့ huawie & samsung (china) မှာပဲသုံးလို့ရတယ်ပြောနေလို့ပါ ။ ကျနော်က ကွန်ပျူတာနဲ့ချိ်တ်သုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ဖုန်း ဟန်းဆက် ပေါ်မှာပဲသုံးမှာပါ။
You should take Huawei C8500 or C8600. Those models are run with Android OS and good to browsing and can install MM font.
ကို​ေ​ရာ​င​်ကျေး​ဇူး​တင်ပါ​တ​ယ​် တစ်ခု​ေ​လာ​က​်ေ​မး​အု​န​်း​မ​ယ​်ေ​နာ​် ကျေ​နာ​်​သိချင်တာ​က အခု ထွ​က​်ေ​န​တဲ​့ cdma 800 အတွ​က​် china handset ေ​တွ​နဲ​့ေ​ရာ​သုံး​လို​့​မ​ရ​ဘူး လား
ဥပမာ (htc ppc 6800,nokia x6(china),htc ppc6900(china),htc hero(china) ,အဲ​့​ဒါ​ေ​တွ​နဲ​့ေ​ရာ​သုံး​လို​့​ရ​ဘူး​လား ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်သုံးဘူးနော်...
Huawei က တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။
အင်တာနက် မရခင်က 5600 က တော်တော်လေး လိုင်းလည်းကောင်းတယ်...ဘက်ထရီလည်းခံတယ်။
အခု အင်တာနက်လည်းနဲ့ အဆင်ပြေတာကတော့ 5900 ၊ 8500 ၊ 8600 တို့က အဆင်ပြေတယ်။
နောက်ပြီး အခုရက်ပိုင်း အရင်လိုမျိုး ကော်ကသိပ်မကောင်းတော့ဘူး...
၅သိန်းတန် ဖုန်းကို computer နဲ့ join တဲ့ modem လေးတွေဘယ်နားရောင်းလဲသိချင်လို့ပါ .......ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြကြပါလားဟင်.....
73/75, 49th St., Between Anawar St. and Maha Bandoola Rd., Middle Block, Ward (1)
PZDG, Yangon, Myanmar.
291830, 297332, 296579
There are more and more CDMA internet users everyday and MPT internet has gone bad to worst everyday single day. I can hardly use internet whole day yesterday
Using internet in Myanmar is like farmers praying for rain during summer...
I already know CDMA 800 ending is like this . There are hundred thousands of CDMA users in the myanmar and they can't handle it . other connection type are handle by two or (three on wi - max ) ISP. But for CDMA 800 , there is only one ISP (may be sub-child ) and traffic user are tons of being Even I know about that , I have to use it coz of i am bankyaw anyway u can use while other people sleep and wish people to haveanice dream
ဒီနေ့နောက်ဆုံးသီရှိသော သတင်းအရ လာမည့် ပြည်ထောင်စုနေ့ 12.2.2011 စနေနေ့တွင် ငါးသိန်းတန် ဂျီးအက်စ်အမ်ဖုန်းများကို နေ့ချင်းပြီး အလုံး2သိန်းကို ချထားပေးတော့မည်။ ထိုဖုန်းသည် အင်တာနက် အဆင်သင့်သုံးနိုင်သော ဖုန်းဖြစ်ပြီး ငါးသိန်း စီဒီအမ်အေကဲ့ သို့3သောင်းထပ်သွင်းပြီးကဒ်ပြောင်းရန်မလိုကြောင်းသိရပါတယ်။
ဘယ်ဟာကောင်းသလဲ ဆိုတာကတော့ ပြောရခက်ပါတယ်။
ပြောရရင်တော့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ အသီးသီးရှိကြပါတယ်။ တမျိုးဆီပေါ့လေ
Service Provider ကလဲပြိုင်ဖက်မရှိ ၊ ချထားတဲ့ မူကလဲ တသတ်မှတ်ထဲ မရှိတော့ သူလုပ်ချင်သလို လုပ်မှာပါ။( တဖက်ဖွင့်၊တဖက်ပိတ်)
network တို့ connection တို့က သူတို့လက်ထဲမှာလေ- အပြိုင်အဆိုင်တွေရှိလာခဲ့ရင်တော့ buyer choice ပေါ့။
အခုနေအခါမှာတော့-- ကိုယ်၀ယ်မယ့် လိုင်းအတွက် အသုံးပြုရမယ့် handset တွေ accessory တွေရဲ့ ဒီမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်မယ့် အခြေအနေပေါ်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးမှ ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီး သင့်တော်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။